ကိုသန်းလွင် ● ရွာက ဘူတာရုံ
>Burma internet shutdown in daytime ahead of the elections
>Burmese in Australia host 63rd Burma's Union Day in Sydney
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Collecting Dust (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မတ် ၇၊ ၂၀၁၉ No tags for this...
မောင်လူပေ – ဆန်ဖရန်စစ္စကို – ၁၀ (နိဂုံးပိုင်း) (မိုးမခ) မတ် ၇၊ ၂၀၁၉ ဆန်ဖရန်မြို့တွင်းကို အားရအောင်လည်ပတ်ပြီးလျှင် မြို့ပြင်နှင့်အနီးအနားတဝိုက်သို့ သွားလည်ကြပါစို့။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ နာမည်ကျော် ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ်တံတားကြီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမြောက်ဖက်သို့ (၁၂)မိုင်ခန့်ရောက်လျှင်...
ခိုင်မာကျော်ဇော – ရပ်အကြောင်း ရွာအကြောင်း – ၄
Khaing Mar Kyaw Zaw ခိုင်မာကျော်ဇော – ရပ်အကြောင်း ရွာအကြောင်း – ၄ (မိုးမခ) မတ် ၇၊ ၂၀၁၉ နေ့ လည်ခင်း ရွာထဲ လျှောက်တော့ မူလွန်ကျောင်းလေး...
ကာတွန်းဘီရုမာရဲ့ လမ်းပွင့်သွားမှာ ကြောက်လို့ပါ …
ကာတွန်းဘီရုမာရဲ့ လမ်းပွင့်သွားမှာ ကြောက်လို့ပါ … (မိုးမခ) မတ်လ ၆၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
လှကျော်ဇော – ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဖိုးပွိုင့်အို အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
လှကျော်ဇော – ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဖိုးပွိုင့်အို အကြောင်း သိကောင်းစရာများ (မိုးမခ) မတ် ၆၊ ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ -၂၅ ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဒါးဗိုစ့် မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ (နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲ)...
K ငြိမ်းချမ်း – အမှောင်ခေတ်ရဲ့အရိပ်အရောင်တွေ (သို့) အလယ်ရိုးမ ကဗျာဆု (မိုးမခ) မတ် ၆၊ ၂၀၁၉ ခရေပွင့်လျှင် ၊ ကြွေရင့်ဝါ၀ါ၊မြေထက်မှာလျှင် ရောကာပေါင်းယှက် ဟောင်းသစ်ရွက်နှင့် တ၀က်မောင်းနီ၊ ဝေ့လည်လည်ကို လေချီသုတ်ဖြူး၊...
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရရွှေမန်းကို လေ့လာခြင်း (၅) (မိုးမခစာအုပ်စင် ကောက်နုတ်ချက်) မတ် ၆၊ ၂၀၁၉ အခန်း (၅) – ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာရေးဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်...
မြဇင်ယော် ● မုန်တိုင်းနောက်ကွယ်က ငှက်ငယ်များ (မိုးမခ) မတ်လ ၅၊ ၂၀၁၉ (၁) နေဝင်သွားလေပြီ။ အိမ်အပြန်နောက်ကျမှာ စိုးရိမ်နေသော မောင်မြင့်လွင်သည် ဖုန်ပေနေသော လက်နှစ်ဖက်ကို ပြန်ကာ လှန်ကာ ခါပြီး ရေးကြီးသုတ်ပျာနှင့်...
ဆောင်းယွန်းလ ● လူ့ဖြစ်ခြင်းကို သီချင်းလုပ်ဆိုမိတယ် (မိုးမခ) မတ်လ ၅၊ ၂၀၁၉ သရဲမြင်းကြီးစီးပြီး ငရဲမင်းကြီးချီတက်လာတာကို စောင့်ရတာမောပြီ သရဲကမှကိုယ့်ကိုမခြောက်ရင် ကိုယ်က သရဲကိုပြန်ခြောက်ရမယ့်အပေါက်ဘဲ ငရဲမင်းကမှ ကိုယ့်ဆီတက်မလာရင် ကိုယ်က ငရဲတွင်းထဲဆင်းသွားရမယ့်အချိုးဘဲ ဒီမိုးဒီရေမှာ...
မောင်လူပေ – ဆန်ဖရန်စစ္စကို (၈) (၉)
မောင်လူပေ – ဆန်ဖရန်စစ္စကို (၈) (၉) (မိုးမခ) မတ် ၅၊ ၂၀၁၉ (၈) ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကို လာလည်မည်ဆိုလျှင် မရောက်မဖြစ်သွားလည်ရမည့်နေရာများ မနည်းလှ။ မြို့တွင်းအပြင် မြို့ပြင်ဖက်တွင်ပါ သွားရောက်သင့်သည့်နေရာများစွာရှိသည်။ ထိုနေရာများထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာနေရာများကို...
မောင်စွမ်းရည် – ပြည်သူတို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးနေ့ ပြန်ပေးလော့ (မိုးမခ) မတ် ၅၊ ၂၀၁၉ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို ဗမာပြည်က တော်လှန်ခဲ့တာဟာ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ တော်လှန်ရေးပါ။ တပ်မတော်တခုတည်းရဲ့ တော်လှန်ရေး မဟုတ်ပါ။ တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုတာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ရဲ့...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ မိုးလင်းတော့မယ်ဟေ့ … မိုးလင်းတော့မယ် …
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ မိုးလင်းတော့မယ်ဟေ့ … မိုးလင်းတော့မယ် … (မိုးမခ) မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည် Related posts ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ကြိုက်တာရွေးစေ …...
သာထက်အောင် ● လူရောင်စုံ၊ ဘဝရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ (၄)
သာထက်အောင် ● လူရောင်စုံ၊ ဘဝရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ (၄) (မိုးမခ) မတ်လ ၄၊ ၂ဝ၁၉ (၂) နာရီ လောက်အနှိပ်ခံလိုက်ရတော့ လူက ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာတယ်။ ညစာမစားခင်မှီဝဲလာတဲ့ ယမကာတန်ခိုးလည်း ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့။ ကဲ….....
ကိုသန်းလွင် ● အိန္ဒိယအစိုးရနှင့် အင်တာနက်ဆင်ဆာ (မိုးမခ) မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၉ အိန္ဒိယအစိုးရက မိမိတို့ဘာသာ အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာလုပ်ကိုင်ခွင့် အာဏာအပြည့်ပေးထားသော ဥပဒေကို ပြဌာန်းပါ တော့မည်။ ချက်ချင်းကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးထားသောအင်တာနက်ကုမ္ပဏီများနှင့် တိုက်ပွဲကို...
တောင်ကြီးမြို့ ခြေဥ ပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံပွဲကို ခြိမ်းခြောက်မှုများကြားမှ ပြုလုပ်ခဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို ကြိုဆိုသည့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ လှုပ်ရှားမှုသည် အနှောင့်အယှက်တချို့ ရှိခဲ့သော်လည်း အေးချမ်းစွာ ပြီးဆုံးသွားသည် ဖြိုးသီဟချို/Myanamr Now (မိုးမခ) မတ်...
ကျော်ထင် ● ကြွက်ဂယ်လောင်းတွေ (မိုးမခ) မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၉ ၁။ ကျုပ်ကို အိပ်မရအောင် အနှောက်အယှက်အပေးဆုံးက မျက်နှာကျက်ပေါ်က ဂယ်လောင်းတွေ တကျွိကျွိအော်သံ၊ တဂျစ် ဂျစ် ကိုက်ဖြတ်သံတွေနဲ့ တဝေါဝေါပြေးသံတွေပဲ။ ကျုပ်အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ...
မိုးခါး ● လက်မပါပဲနတ်ဘုရားဖြစ်ချင်နေသူ
မိုးခါး ● လက်မပါပဲနတ်ဘုရားဖြစ်ချင်နေသူ (မိုးမခ) မတ်လ ၃၊ ၂၀၁၉ ပျင်းရိနေတဲ့ကပ်ပါးတကောင်ပေါ့ ငရဲကိုပန်းလိုအထင်နဲ့ စိတ်ကြီးဝင်နေ လက်ညှိုးထိုးမရတဲ့သမ်းဝေမှုမှာ သွေးဆာနေတဲ့နှလုံးသားကကိုက်ခဲ အရှင်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ ပုတ်အဲ့နေတဲ့အလောင်းကောင်လို သူရဲကောင်းမဏ္ဍိုင်ကိုသာအားကျပြီး အရေပြားပေါ်ပုတ်သိုးနေတဲ့မာယာ တဖက်သားရဲ့ကိုးကွယ်ခံမှုမှာ အမှောင်ကျချင်နေတဲ့အခါ စကားလုံးတွေ...
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● ရန်စယ်လီယာက ကင်မရာလေးကို လွမ်းတယ်
ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● ရန်စယ်လီယာက ကင်မရာလေးကို လွမ်းတယ် (မိုးမခ) မတ်လ ၃၊ ၂၀၁၉ ရန်စယ်လီယာ က ကင်မရာလေးကိုလွမ်းတယ် ဘယ်ဝတ်စုံ ဝတ်ဝတ် ဝတ်စုံပြည့် ဝတ်လေ့ရှိတဲ့ ကင်မရာလေးပေါ့ လူစည်ကားတဲ့...
ဂါမဏိ ● လူ့အခွင့်အရေး၏ တခြားတဖက်မျက်နှာ (မိုးမခ) မတ်လ ၃၊ ၂ဝ၁၉ ၂ဝဝ၈ ခု ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် ၆ဝ ပြည့်အခမ်းအနားတွေ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင်းပခဲ့ပါ...
Page3of 952«12345...952»